Test de velocidad: Nexus6VS HTC Desire 816 | Androidsis
Francisco Ruiz | | HTC က, ကို Nexus
ကျနော်တို့ကဆက်လက် Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ချင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်သာမန် Android အသုံးပြုသူများအတွက်အနည်းငယ်သာအရေးပါသည့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်မတူဘဲနေ့စဉ်သုံးရန်အတွက် Android terminal နှစ်ခုအကြားရှိကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ Android အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုသည်၎င်းကိုပေးလိမ့်မည်၊ အသုံးပြုသူအားလုံး၏ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရှိပြီးပိတ်ထားနိုင်သည်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူသည်အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲတွင်သူ၏အလှည့်သို့မဟုတ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့သည် Nexus6VS HTC Desire 816, ကွဲပြားခြားနားသောအကွာအဝေးမှပိုင်ဆိုင်သည့် Android terminal နှစ်ခု, ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, သူတို့ကသူတို့ကိုအကြားကွဲပြားခြားနားသောလက်လီစျေးနှုန်း၏အကွာအဝေးကဲ့သို့ဤမျှလောက်ခြားနားချက်ရှိသလားရှိမရှိကြည့်ဖို့ duel ချင်သော။
Terminal နှစ်ခုစလုံးသည် hardware ပိုင်းတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ ဤအတောအတွင်းသူ Motorola Nexus6နောက်ဆုံးပေါ် Processor ကိုရှိပါတယ် Qualcomm Snapdragon 805 QuadCore ကဘာမှမပိုဘူး၊ ၁ ဂါဇ y3GB RAM မှတ်ဉာဏ်အဆိုပါ ကို HTC Desire 816, ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့အနိမ့် Processor ကိုရှိပါတယ် Qualcomm Snapdragon 400 QuadCore to ၁ ဂါဇ ရုံရုံ RAM 1,5 GB.
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ရှိပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အတိုင်းဟတ်ဝဲနှင့်ပတ်သက်သောထူးခြားသောကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ပုံမှန် terminal တွင်အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုခံစားနိုင်ခြင်း (သို့) တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့မဟုတ်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည် HTC Desire 816 သည်မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သော Nexus6ကိုမနာလိုဝန်တိုစရာမရှိပါ Mountain View ရှိသူများ၏ကြယ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်အထင်ကရနေရာ။
သတိပြုရမှာက Nexus6၏စျေးနှုန်းသည် Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုအထူးသိုမဟုတ်သိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ်ပမာဏ 32 Gb ပါသည့်မော်ဒယ်သည်ယူရို ၆၄၉ အထိမြင့်တက်ပြီး HTC Desire 649 ကိုယူရို ၃၅၅ ခန့်ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။ terminal တစ်ခုနှင့်အခြားအကြားယူရို ၃၀၀ ကွာခြားမှု.
ဒါကြောင့် Android terminal အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီမေးခွန်းမေးသင့်ပါတယ်။ ငါတကယ်အဲ့ဒီ terminal model ကိုလိုအပ်ပါသလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု: Nexus6VS HTC Desire 816